eNasha.com - फोहोरको फोहोरी खेल
फोहोरको फोहोरी खेल
काठमाडौँ कति संवेदनशील छ भने ओखरपौवामा कसैलाई झाडापखाला लाग्यो भने काठमाडौँबासीको नाक थुन्नुपर्ने हुन्छ । कुरा अलि बुझ्नु भएन होला ! कुरा काठमाडौँको फोहोरका बारेमा हो । केही दिनयता काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिएको थुप्रियै छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ (डम्पिङ साइड) ओखरपौवा (धादिङ) मा त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरुले फोहोर फ्याल्न रोक लगाएपछि फोहोर सडकमा अलपत्र परेको हो । सडकमा अलपत्र परेको फोहोर यति ज्याद्रो छ कि जतिसुकै नाक थुने पनि जबरजस्ती घुस्ने प्रयास गर्छ । फोहोर थुप्रिएको ठाउँमा हिँड्ने जस्तासुकै पराक्रमी व्यक्तिहरु पनि नाकको प्वाल जोगाउन थालिहाल्छन् ।
काठमाडौँबासीको नाकको लम्बाइ नाप्न बारम्बार बाध्य पार्ने ओखरपौवाबासीले सभ्य काठमाडौँलीहरुलाई एउटा गतिलो व्यङ्ग गरिरहेका छन्- तिमीहरु बाहिरबाट हर्ेदा मात्र सुकिला छौ । दैनिक यत्रो फोहोर कसरी निकाल्न सकेका !
काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अधिकारीहरु पनि साह्रै मेघावी छन् । तिनले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय निकाल्न सकेका छैनन् । तर पनि लाज पचाएर जागीर खाइरहेका छन् । तिनले ओखरपौवाको छत्रेदेउरालीका वासिन्दाहरुका लागि गर्नुपर्ने विकासका कार्यक्रमहरु गरिदिएका छैनन् भनेर फोहोर फाल्न निषेध गरेका हुन् । तिनलाई नगरपालिकाहरु ललितपुर र काठमाडौँ तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा वाषिर्क ८० लाख रुपियाँ दिनुपर्ने थियो तर विभिन्न कारण देखाई त्यो रकम उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । खासमा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण फोहोर बन्द गर्नुपरेको बन्दका आह्वानकर्ताको भनाइ छ ।
यो बन्दले एक पटक काठमाडौँबासीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ- धेरैजसो फोहोरलाई घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने बानी बसालौँ र त्यसलाई मल बनाइ बारीमा उपयोग गरौँ । बाल्न मिल्ने फोहोरलाई बालौँ र बाँकी बचेखुचेको फोहोर मात्र बाहिर निकालौँ । काठमाडौँका तीस लाख जनताले यो उपाय अपनाए भने आधा समस्या समाधान हुनसक्छ ।
streets संविधानसभा हल्ला सेलेब्रिटी awards माओवादी समलिङगी celebrity पेट्रोल hi-life अनुभव events मोबाईल crisis festival